कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेका हुन् अनुपले ? – Mero Film
कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेका हुन् अनुपले ?
विराङ्गना फिल्म चल्ने बेलामा अभिनेता अनुप विक्रम शाहीको नाक मुख निर्माताले पनि मिडियाले पनि देखेनन् । अनुप विक्रमले बरु यो फिल्मको पैसा नभएर निर्माताले पुरै फिल्म नखिचेको आरोप लगाएर पन्छिने काम गरे । अनुप विक्रमको यो तरिकाको निर्देशकले आलोचना गरे, निर्माताले दुख मनाए ।
फिल्म चलेन, अनुपलाई फरक परेन । अनुपको नाममै चल्छ भनेर निर्माताले आशा गरेको झमकबहादुर पनि चल्यो । यो फिल्ममा पब्लिसिटीका लागि पनि अनुपको नाक मुख देखिएन । खै अनुप कता थिए ?
अनुप हराए, निर्माताको निन्द्रा हरायो, हलमा दर्शक नै हराए, व्यापार पनि हरायो । दुई फिल्मलाई पुरै वेवास्ता गरेका अनुप अहिले जय शम्भु फिल्मको पब्लिसिटी गर्न काठमाण्डौ बाहिर कुदेका छन् । राती राती विभिन्न शहरका रेष्टुरेन्टमा गएर पब्लिसिटी गरेका छन् ।
२ वटा फिल्मलाई पाखामा राखेका अनुप अहिले जय शम्भुलाई काखामा राखिरहेका छन् । कि ती २ फिल्मबाट अनुपलाई आशा नै थिएन ? कि, निर्माता सोझा थिए ? अहिले अनुप दौडिने, पहिले दौडन पर्यो भन्दा पनि नदौडने । यो त कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा भएन र ? आखिर, लगानी गरेपछि हरेक निर्मातालाई पैसा उठोस् भन्ने चाहना त हुन्छ होला ।
२०७५ साउन २८ गते १०:०० मा प्रकाशित